Amadivayisi oveza inkampani Asus, bekulokhu idume izinga zabo eziphakemeyo, design ekhangayo futhi manufacturability njalo. Kuyaphawuleka ukuthi le isebenza ngokulinganayo kokubili PC tablet futhi izincwadi, kanye namaselula, enikezwe ibhalwe nale logo. Ngakho-ke akukho lutho isimanga yokuthi inethiwekhi kungabonwa eziningi nezincomo ezinhle zalabo ephethwe ngokuqondile nakho ukuzwa Smartphones "Asus".
Izibuyekezo Customer mayelana amadivaysi, kanye nemingcele lobuchwepheshe ezinye onobuhle ethandwa kakhulu luzothunyelwa kule athikili. Siphinde sibheke emihle nemibi ngamunye, futhi ngaleyo ndlela ngeke uthumele sinqumo ayo yokuthi buyini ngempela Asus-smartphone.
Ukuze uqale, sizozama elichaza lezi Isobho bebonke. Ukubukeza kwethu uzobe ubuhanjelwe 3 onobuhle, okuyilezi: smartphone "Asus Zenfon 2 Laser" (imibono mayelana kuyoba ukushicilela kwasekuqaleni), imodeli Zenfone 4, futhi Zenfone 6. Ngakho, phambi kwethu - amadivaysi ezintathu kabani indices anda ukuwahlanganisa ngesikhathi 2. kuleli cala, funa logic ekunqumeni amafoni awubalulekile - inguqulo "yesibili" akalingani namuntu kuze kube "Quartet" ka Ukucaciswa.
Nokho, umbono ovamile uwukuthi smartphone 4 amamodeli - nomele sezimali esanele ababusi "strong" "Zenfon" (esiyingxenye Smartphones "Asus"). Izibuyekezo abonisa ukuthi ngisho eziphansi kanye ukulinganiselwa okuphawulekayo ukusebenza kungaphazamisi ifoni sina ngaphambi mncintiswano ekilasini.
Ekhuluma Zenfone 2 no-6, kufanele kusho ukuthi zifana kakhulu kokubili izici yawo nangezindlu definition ingxenye. Umehluko Yiqiniso, bakhetha "ezimbili" - it has a enamandla ngaphezulu processor, ikhamera futhi imishini bebonke. Nokho, kokubili smartphone akunakubangelwa ekuqaleni ekilasini "phakathi", noma ibanga ephakeme ka "engxenyeni kahulumeni."
Futhi, ukuze ukusheshe sithole imodeli simchazela, siphawula intengo bakuyiphi. Ukutshela iqiniso, kuhlukile - futhi, ekugcineni kwahlaluka ukuthi kulula kakhulu ukufinyelela kuwo, yebo, smartphone "Asus Zenfon 4". Izibuyekezo Customer abonisa ukuthi (ngesikhathi udaba) ahlinzekwa ngentengo ruble ayizigidi 4-5. Lena - ngempela ezishibhile idivayisi nge amakhono ayo.
Ngaphezu kwalokho, isigaba sabaphathi yethu inani lingu "eziyisithupha". Kuyinto, futhi, ngokusho idatha kusuka kubasebenzisi, wanikela ama-ruble ayizigidi 10-11. Kusobala ukuthi ukushintshwa smartphone kusukela "isabelomali" avuke abaningi ku "phakathi".
Ekugcineni, kwahlaluka ukuthi smartphone eqolo "Asus Zenfon 2" ZE500CL 5. Izimpendulo ngaye ikwenza kucace ukuthi ukudayiswa kwakunezinguqulo eziningana kule divayisi. Kulula kakhulu ukufinyelela kuwo kubo wanikela ama-ruble ayizigidi 15; ngenkathi inketho eqolo yayitholakala 19 000.
Yini engingayisho mayelana ukusabalala intengo enjalo? Okokuqala, nge "engxenyeni kahulumeni" ecacile ukubuyekeza kwethu, sinqume - kungcono "ezine." Okwesibili, namanye amadivayisi ezimbili ezithi azifane e imingcele, kodwa kuhluke liklasi labo. It kufakazela jikelele Asus yokusondela ukuma imikhiqizo yabo; umsebenzi niches eziningana futhi, ngenxa yalokho, ukumelwa ebanzi imikhiqizo yabo emakethe.
Ukuze kuqhutshekwe njani idatha yomsebenzi osizayo models.
Smartphone "Asus Zenfon 2"
Ngempendulo sikwazile ukuqoqa ngasinye amafoni, thina izokhipha ekupheleni ukubuyekeza kwethu. Into wukuthi bonke lahlukaniswa izinhlobo - emihle nemibi.
Iqembu uphinda incazelo yokuqala nemingcele kudivayisi, idatha yayo lobuchwepheshe. Lezi sizobe ukuchaza kuwe kwasekuqaleni. Eyesibili isigaba Izibuyekezo - lena ukuhlolwa negative. Basitshela ukuthi abanye ukwehla okuhlonziwe abathengi unit - nokuthi kudingeka sinake lapho ekhetha ifoni. Ngokwesibonelo, uma idatha lobuchwepheshe kuzosiza ukwakha umbono jikelele mayelana nobuhle lolutsite, izibuyekezo ku-smartphone "Asus Zenfon 2" ZE500CL, isibonelo, ezisiza ekuboneni kahle nobuthaka bayo. On kubo uzodinga ukwazi ngaphambi kokuthenga idivayisi, kunokuba emva kwalo.
Ngakho, ngesisekelo okuyinto imodeli yokusebenza esizukulwane sesibili? Lokhu - Intel Atom Z3580, okuyinto has a core 4 futhi imvamisa iwashi 2,33 GHz. Isibalo yokugcina unesibopho ijubane ukucutshungulwa wokugaya ulwazi, futhi, uma iqhathaniswa nezinye izinhlobo of Smartphones, kungashiwo ngokuthi okusezingeni eliphezulu. qinisekisa lokuma lokhu: isibonelo, imodeli Bypasses ngokucacile Xiaomi MI4 kanye Samsung Galaxy S5; kodwa Meizu phansi kunabaphostoli MX4 kanye Galaxy Note 4.
Esinye isici esibaluleke yikhono kukhombisa kancane ukushaja. Kuleso simo, uma sikhuluma smartphone "Asus" (Ukucaciswa, izibuyekezo mayelana sikuphi manje), it is a umthamo webhethri 3,000 mah. Naye idivayisi ungadlala isiqophi kufika emahoreni angu-10 umdlalo - kumabhuku 4 - kufika emahoreni angu-13-15. Uma eqhathaniswa nezinye izinto ezifanayo, kuba - hhayi eziningi, kodwa ngempela, ngakwazi ukukhuthazela.
13-megapixel inzwa, okuyinto efakwe smartphone "Asus Zenfon 2" Izibuyekezo ngokuthi isixazululo ayakufanelekela. Siqhuba izifundo ukubuyekeza, siqhaphele ezinye ezinganembile ngomsebenzi wayo. Ikakhulukazi, kuziwa ukukhanya. Uma udala izithombe ezimweni ukukhanya enganele kungenzeka esikhundleni imibala ethile. Ngenxa yalokhu, into engcono - ukudubula ngaphandle sezulu sunny. Yiqiniso, ukukwazi ukuze balandele lesi simiso akuhlali. Futhi libuyekeza Smartphones "Asus Zenfone 2" umbiko mayelana nokuba khona imodi ekhethekile lapho ungakha "okukhulu", kodwa kancane esinembile (ngokuya umbala) izithombe.
Isisekelo umsebenzi "amane" Usenguyena Intel Atom, kodwa inguqulo firmware kuhlukile kancane - ke Z2520. I module has cores ezimbili, imvamisa zazo ifinyelela 1.2 GHz: njengoba kungabonwa, the velocity cishe amabili izikhathi ngaphansana esimweni lapho cishe kwakuyihora smartphone "Asous Zenfon 2" ZE500CL 5.
Izibuyekezo ukukhombisa ukuthi ngokuyinhloko ukuboniswa ijubane idivayisi; kulawo imisebenzi ukuthi ongenza. Okokuqala, lapha ehloselwe ukudlala imidlalo agqamile zokusebenza ezishicilelwe ku-Google Play. Uma 'ngazimbili' ngempela owakwazi ukusebenza noma iyiphi isofthiwe, une version 4, kukhona imigoqo uhlelo izidingo kudivayisi.
On smartphone, "Asus Zenfon" (izimpendulo uqinisekise lesi) efakwe umthamo webhethri ka 1.750 mah. Uma sicabanga ukuthi idivaysi has a classic kakhulu icala ezingeni ukusetshenziswa, kuba sobala - ne ibhethri ngokugcwele ifoni uzokwazi "ukuzabalaza" Ningabizi lutho ngaphezu nxenye suku.
Okunjalo isinqumo developers, kusobala, weza ngenxa yokuthi bafuna ukwenza iKhabhinethi ohlabayo. Futhi iqiniso - a Smartphones oyisizukulwane sesine, "Asus" (izibuyekezo zamakhasimende uqinisekise ukuthi ngazo zonke izindlela) ezahlukene ububanzi ezincane - ngenxa yalokhu, ukuze sifinyelele ukwanda ibhethri akunakwenzeka.
Ekugcineni, umbandela yethu yesithathu izici izenzo ifoni njengoba idivayisi ikhamera, ke amathuba. On Zenfone 4 ezifakwe-matrix 8 megapixel, nakho has a simiso kuqiniswa futhi i-otho focus (kuziwa unit main). Kukhona ikhamera ebheke phambili ukuthi has a isinqumo MP 0.5 kuphela: kufanelekile ngokudala "selfie" elula -Pictures.
Nokho, ukuze siqonde kangcono izinga zedivayisi optical, lwanele ukufunda imibono umsebenzisi, esakwenza. Echaza Smartphones "Asus" Izibuyekezo (anikezelwe version wesine igajethi) zibonisa ukuthi ikhamera ngezinye izikhathi abakwazi ukubonisa umbala isethi, futhi izithombe ephansi ukukhanya ulahlekelwe nokucija kanye nokunemba. Yiqiniso, konke lokhu - ngemiphumela isenzo ababuthaka imishini hardware efakwe kudivayisi isabelomali.
Isixazululo kungaba ukudubula egumbini ovuthayo, noma umane ukwamukela iqiniso lokuthi kukhona.
Smartphone "Asus Zenfon 6"
Izibuyekezo abonisa ukuthi imodeli lwesithathu, ngekubamba lichaza iqhaza kunhlolovo yethu, okwethulwa isigaba ukuhluka lobuchwepheshe ngenxa kwesikrini yayo idayagonali. Ngakho, it is a isibonisi-6 intshi, okuletha ngokuzenzakalelayo idivayisi esigabeni 'phablet ".
Ukuze uthole ukwaziswa sendlela idivayisi ibekwe, esekelwe izici intengo, siye kakade kuchaziwe ngenhla. Kodwa kuthiwani nemingcele lobuchwepheshe zedivayisi?
Ngokusho nokwaziswa kusukela Umenzi, imodeli ibhajethi Intel processor ehlanganisa cores ezimbili (sikhuluma Atom Z2580). Naphezu kweqiniso lokuthi yabo ukukala amandlajubane-2 GHz, ngokuvumelana ukubuyekezwa, unyathela amabhuleki, ulenga nalokho okubizwa ngokuthi "frost" imodeli isikrini ningagcini. Lokhu kungase kubonise ngezinga eliphezulu wenduduzo nokwenza nesofthiwe nokuxhumana idivayisi hardware yayo isisekelo.
Yiziphi amathuba "ukugxusha" yale foni? Uhlolo ku isicelo lokuma wabonisa ukuthi ukusebenza ngokucacile phambi smartphone Google Nexus 4 kanye Xiaomi MI2, nakuba kubonakale phansi kunabaphostoli Galaxy Note 3.
Ake ngithi nje: ukusebenzisa "okukhulu" (ngokuya ihluzo) imidlalo unga, kuyiqiniso, abanye abakwazi ukudlala ngesikhathi isinqumo eliphakeme.
Ngokusho abakushoyo mayelana Smartphones "Asus" Izibuyekezo nabanikazi, imodeli efakwe umthamo webhethri ka 3.100 mah. Yiqiniso, okuningi kakhulu kunalokho endabeni le "Quartet", kodwa ucingo "isikhathi eside" (ngokuya ikhono "ukubamba" othile icala ayikwazi) inikezwe usayizi imodeli kwesikrini, ukusetshenziswa kuyoba enkulu ngokwanele. Ngo ukusebenza amandla khudlwana (play games ku ukukhanya esiphezulu kanye okusezingeni eliphezulu umsindo ivolumu) smartphone ingasebenza kancane kuka amahora 5. Lena yi ezinhle kakhulu; e-standby mode, imodeli uyakwazi ukubamba kuze kufinyelele 296, futhi ingxoxo - kufika emahoreni angu-28.
Ingasaphathwa, futhi ngale mojuli isivele ifakiwe ku phablet yethu. Isenzo sokunqophisa uthi isinqumo salo 13 megapixels (okusho main); ikhamera olwengeziwe has isinqumo matrix at 2 megapixel. High izinga ukuqoshwa inikeza othomathikhi uhlelo ngokugxila, futhi eziningi okuhlungayo isofthiwe anganikeza ngezinga eliphezulu umbala ukukhiqizwa kanye nokucija imigqa.
Izinkinga, ngokuvumelana ukubuyekezwa, is ngokwesiko zenzeka ekukhanyeni ongaphakeme. Khona-ke matrix awulona kahle bona isibalo imibala, ngenxa yalokho alikhombisi isithombe. Nokho, lesi simo jikelele ungcono endabeni le "Quartet".
Uphenyo Zenfone 2
Okokuqala, siphawula ukuthi izincomo, okuyinto ukweluleka abathengi ukuthenga kule divayisi, sakwazi ukuthola inombolo enkulu. Okungenani ekubonisa ithandwa enkulu Smartphones kanye nezimfanelo zayo ezinhle emehlweni abantu, ukuze uyilethe ekuqapheleni yabo.
Ngaphezu ukubuyekezwa omuhle lapha, yebo, wasethula ezinye imibono engakhi ukuthi uhlu devaysa nebubi. Mayelana nabo sizoxoxa ngani kulesi sihloko ukuze ubaqondise lapho bedabula amazwe ubuthakathaka zedivayisi (njengoba kushiwo ekuqaleni isibuyekezo).
Ngakho, nanti iphuzu lokuqala - kungcono ibhethri. Amakhasimende imvamisa bathi smartphone sinesikhundla elincane ibhethri, okuyinto ilahlekelwa ukushaja ngokushesha kunenani. Inkinga kuvamile impela phakathi kumadivayisi eselula yalesi sifundo, kodwa isixazululo yayo ilula: nje ukuthenga ishaja ephathekayo ekhethekile (Analogue PowerBank ethandwa). Lokhu ahlinzekwa, kuhlanganise, phakathi izesekeli akhiwa Asus. Ngakho-ke, kutuswa ukuthenga le gajethi brand.
Iphuzu lesibili - kuba ezinye amaphutha isofthiwe onjiniyela. Basuke obonakaliswe yokuthi, ngokwesibonelo, i-smartphone ulenga eziningana ngokushesha ngemva isibonisi Ukuvinjwa. Lokhu kwenzeka uma idivayisi ivikelwe ukhiye sokuqhafaza. Kungenzeka ukuthi kukhona ukuphazamiseka firmware isofthiwe, ngenxa okuyinto kukhona kanye frieze (hang). Nokho, kuyinto yesikhathi esifushane, kanti uma kungenjalo ukugxila kuwo, cha enkingeni akufanele ukuletha.
Abasebenzisi kuvamile ukukhuluma ngezindawo isibonisi kahle avikelwe. Mhlawumbe le nkinga kuvamile phakathi amadivaysi, kodwa futhi ukubhekana naso kalula. Nakekela ifilimu noma ingilazi zokuzivikela (okuyinto ethe njo) esikrinini, ngakho ngeke umsindise main navigation module kwidivaysi yakho ekulimaleni.
Kukhona ukubuyekeza idatha kanye izinga eliphansi umshini Yakha. Ikakhulukazi, amakhasimende akhononde ukuthi ikhava ngemuva smartphone esifanelana linamathele kuwo ngokwanele ukuba umzimba, yingakho kukhona igebe amancane creaking. Yiqiniso, iphutha ayikwazi sibi noma ezibucayi, kodwa kukhona okwamanje operation.
Ukuhlaziya ezinye amazwana eziningi inhlolovo ethandwa kwezinsiza, asikwazanga ukuthola ezinye mass kwamaphutha abalulekile. Yiqiniso, lokhu - inkomba idivayisi.
Uphenyo Zenfone 4
.Njengoba sasibuka Smartphones ezithakazelisayo echaza "Asus" izibuyekezo zamakhasimende, abazinikezele kuleli imodeli. Futhi-ke, wathola inqwaba.
Abathengi "Zenfon 4 'ezidumisa umkhiqizo kakhulu, ebhekisela izindleko zalo ongaphakeme, umakhi idumela elihle, izinga ezinhle Yakha. okubuyayo kakhulu, bachazwa nokunye, okuyinto thina kakade okukhulunywe ngaye Ukubuyekeza lobuchwepheshe imodeli. Kodwa-ke, abasebenzisi abaningi ungakhohlwa ukufaka nemibi ababhekana nazo lapho ukusebenza negajethi. Mayelana nabo, funda ku.
Ukuzimela, futhi, kuyinto embi, futhi lokhu imodeli. Njengoba sazi ukuthi ababuthakathaka ibhethri efakwe kule mode evamile ukusetshenziswa, ungasho, ngaphandle ukuthi amahora mayelana 9-10 wokusebenza. Lokhu kusho ukuthi ukuze ukwazi ukusebenzisa imishini emini ukusebenza, ke kuyodingeka ukhokhiswe kabili.
Ngaphezu kwalokho, ukusho nezinye nemibi. Ezinye ababengawujabuleli yokuthi idivayisi alinikezi flash; nezinye - kufanelekile Friend kakhulu ikhava yangemuva (okuyinto ngenxa kuyinkinga ngempela ukususa). Kukhona incwadi ehlaziya ababuthakathaka 3G-module (ngenxa okuyinto ijubane uxhumano kwi-Inthanethi yeselula ephansi kakhulu kunalokho devaysakh ezifanayo nezinye onobuhle).
ukukhumbula ababuthakathaka phakathi ukubonisa amadivayisi kwamaphutha (okuyinto engenakwenzeka ukusebenza kwelanga), ukungabi ikhiphedi ukukhanyiselwa amaphutha software. Leli phuzu lokugcina esidumazayo ikakhulukazi, uma kubhekwa ukuthi ngisho update firmware kungasizi ukuqeda kubo. ukwehluleka okunjalo kungatholakala kwimenyu umlayezo we-SMS, lapho uphinda ushayela nezinye ababhalisile, ukudlala ezihlukahlukene izicelo.
Uphenyo Zenfone 6
Yiziphi izinto ezimbi sakwazi ukuthola mayelana nohlelo lwethu 'nesithupha'? Okokuqala, kuba - ezinkulu, into ngisho Ubukhulu okukhulu kakhulu. Abanye abathengi futhi uqaphele ukuthi lesi sizathu esenza igajethi akusilo ukhululekile kakhulu ukusebenza (nakuba kungcono phablet ekuqaleni has a TV screen esikhulu futhi umzimba mkhulu).
Okwesibili, kuneminyango izikhalazo mayelana amaphutha ingane ingxenye isofthiwe; basuke ivezwa ngendlela lokho kungenzeka ilahlekile koxhumana nabo amarekhodi athile; singancaba gyroscope noma kakhulu ukubambezela isiphequluli (uma uthayipha). Okwesithathu, abaningi bhala ukuthi ifoni kuthulile kakhulu. Okuningi amaphutha abalulekile amadivayisi okukhulunywa abathengi atholakele kithi.
Indlela flash efonini Samsung: uthando umsiki mobile
Ukubukeka wokuqala laser disc